Vimba mbeva uye makirabhu eema teleworking, zvakakosha here? | Gadget nhau
El telecommuting Chave chinhu chakajairika pamabasa mazhinji nhasi, kutaura zvazviri, isu tinofanirwa kuve tichikoshesa iyi mashandiro evashandi pamusoro pevamwe pese pazvinogoneka. Nekudaro, vashandi vazhinji vaive vasina kugadzirira kutarisana nemukana wekumisikidza basa pamba.
Makomputa zvishandiso ave chikamu chakakosha kana zvasvika pakutibatsira muzuva redu rebasa, ndosaka kuActualidad Gadget nguva pfupi yapfuura tiri kuunza mashoma mawongororo akatarisana neichi chikamu. Tinokuunzira kuongororwa kweTrust keyboards nemakonzo kuitira kuti iwe ugone kuziva kuti ndeipi inonyanya kukodzera zvaunoda.
1 ODY keyboard uye mbeva kurongedza
2 Ozaa isina waya mbeva
ODY keyboard uye mbeva kurongedza
Chinhu chakareruka ndechekugara uchibheja pabhobhoyo uye mbeva rongedza rinoshanda "rakabatana ruoko" uye rinogadzirisa zvoga. Naizvozvo, kana iwe uchizokwira imwe chete gadzirira yebasa rehofisi otomatiki kumba, mapakeji aya akanakisa.
Mhando zhinji dzakadai seLogitech, Trust kana Genius dzinopa iyi mhando yemubatanidzwa iyo ine mamaki uye makonzo. Zano redu nderekuti mukugara unogara uchienda kune zvigadzirwa zvakagadzirwa nepurasitiki dema uye sechiedza sezvinobvira.
Mune ino kesi isu tinotarisa pane iyo ODY Trust modhi, kiibhodhi uye mbeva kurongedza ine chinyararire system inonyanya kukosha kune teleworking. Mumba medu tinenge tichida kuti tiwedzere kunyarara nekuti munzvimbo yakamanikidzwa zvakanyanya kupfuura nguva dzose tinofanira kuita mabasa edu uyezve kudzivirira kukanganisa vatinogara navo kana hama.
Ose mbeva nekhibhodi mune ino kesi ane mabhatani uye akanyarara membrane makiyi. Mushure mekuyedzwa kwedu isu tinofanirwa kutaura kuti iyo keyboard yakanyarara yakanyarara, zvisinei, zvinogona kuitwa zvisingawanzoitika kune mushandisi wenguva dzose nekuda kwekushayikwa kwemhinduro izvo zvatinogona kucherechedza kana tichivamanikidza.
Tenga Trust keyboard uye mbeva kurongedza kwema 24,99 euros chete
Kana iri keyboard, Isu tine anosvika gumi nematanhatu akafanogadzirirwa makiyi ese ari maviri Microsoft Office uye multimedia manejimendi. Zviripachena, iyi keyboard, sevaya vese vakatarisa teleworking, iine nhamba yekhibhodi ine mapfupi uye kukiya. Muchikamu chepamusoro chepamusoro tine magetsi matatu e LED izvo zvicharatidza mashandiro akakodzera.
Iyo keyboard, yechikamu chayo, zvakare inopokana nekudeuka, ndiko kuti, hatifanire kunetseka kana tikadonhedza kapu yemvura kana kofi pairi, kunyangwe nekuda kwezvikonzero zviri pachena hatina kukwanisa kuyedza chiitiko ichi.
Ose keyboard uye mbeva zvakabatana kuburikidza neiyo USB chiteshi. Muchiitiko chegonzo, rine rakapfekwa nerabha pamativi ekunyaradza kukuru uye kusadzikira zvishoma. Bhatani riri kumusoro kubata nekumhanya kweiyo pointer, ehe, tinosuwa mativi mabhatani ekukurumidza kuwana.
Kumashure, iyo keyboard ine iyo yekukwirisa system, zvisinei, ini ndinokurudzira kuti iwe uishandise mu "flat" mode nguva dzose kudzivirira marwadzo muzvanza izvo isu takasangana nazvo. Zvikasadaro, iyo keyboard ine marongero akanaka sekureba sekunge iwe wajaira kubata kwayo uye kuramba.
Iyi keyboard uye mbeva ODY naTrust inoenderana neese Windows uye macOS uye Chrome OS, saka mune zvakajairika mazwi hatizove nematambudziko mazhinji mukushandisa kwezuva nezuva. Mutengo unokurudzirwa wechigadzirwa ichi i24,99 euros, unogona kuitenga pamutengo wakanakisa paAmazon pa IYI BHUKU.
Ozaa isina waya mbeva
Isu tave kutaura nezve mbeva, yechipiri huru nzvimbo yekudzora komputa yedu, mune ino modhi Ozaa de Vimba. Zviripachena tinoiwana iine fanano ine mufungo kune mamwe makonzo ekumusoro-soro kubva kumamwe makambani anokwikwidza, chimwe chinhu chisiri hacho pfungwa yakashata, kunyanya kana tichifunga nezve mutengo.
Iyi mbeva iri Plug & Tamba uye ine USB chiratidzo chinogamuchira, icho mune dzidziso inovhara kusvika pamamita gumi, chimwe chinhu chatisingatombo tarisa, nekuti hatingavone skrini mune iyoyo. Haina Bluetooth kana chero imwe mhando yeasina waya tekinoroji, saka uchafanirwa kutora chiteshi che USB.
Ine pamusoro pe Bhatiri chiratidzo LED inozotsvuka kutsvuka. Mbeva inopinda "Nzira yekurara" kuchengetedza bhatiri otomatiki, uye "icha" kumuka nekudzvanya chero bhatani kana kuita kamwe kamwe kufamba. Kunze kweizvi zvese, chakasimbiswa ndechekuti isu tinowana rechargeable lithium bhatiri mairi.
Sezvakaita nekhibhodi uye mbeva kit yatakambotaura nezvayo pakutanga, mune izvi isu tinowanawo akanyarara mabhatani mune ese kesi. Iyo inogadzirwa zvachose yeplastiki ine zvimwe zvidiki zvidiki mualuminium, mativi achigadzirwa neerabha silicone yekuvandudza kubata.
Zviripachena icho chigadzirwa chakareruka nekuda kwepurasitiki iyo yaigadzirwa, zvisinei, ini pachangu ndinoona mabhatani ayo epadivi achibatsira kwazvo, kwatichakwanisa kufamba "kumashure" uye "inotevera" uye vhiri rerutivi kuti tikwanise kufamba zvakanaka kuburikidza nezvinyorwa. Pakazara, matanhatu mabhatani ekuvandudza kugadzirwa.
Tinogona kuzvitenga nemavara matatu akasiyana, bhuruu, nhema uye chena. Sezvauri kuona, chikwata chatakaedza mukuongorora kwedu ndicho chichena, kunyange ndichifanira kutaura kuti bhuruu rakasvibirira zvimwe rinonyanya kukwezva, zvisinei, ini ndinotora mukana wekuratidza kuti tinofanira kugara tichienda kune nhema kana isu tiri kutsvaga mukugara nekusimba.
Isu hatina chokwadi chekufungidzira maererano nehupenyu hwebhatiri, panguva yekuyedzwa kwedu kweinopfuura vhiki isu hatina kuda kuichaja. Huremu hwese hwangodarika magiramu zana, saka zvinonaka, uye inowirirana zvizere nezvose zviri zviviri Chrome OS uye Windows uye macOS.
Iyi mbeva inodhura yakatenderedza 49,99 euros, zvisinei, ikozvino irimo kupihwa paAmazon mune yayo nhema unit ye ​​39,99 euros chete, iyo inomiririra kudzikiswa kwe20%. Unogona kuitenga IZVI CHINONZI pamutengo wakanakisa uye nezvose zvivimbiso.
Aya anga ari mazano edu mushure mekuyedzwa kweTrust zvigadzirwa zve teleworking, tinovimba kuti ikozvino wave neruzivo rwakajeka nezve maunganidziro basa pamba musina kuyedza zvakanyanya uye nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, wakamirirei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Vimba mbeva uye makirabhu eema teleworking, zvakakosha here?
Iyo Xiaomi Redmi Cherechedzo 9 Pro inopokana sei